Jamballa: Gaarsiinta Blogger ee Calaamadaha | Martech Zone
Gaarsiinta Blogger waxay ku siin kartaa ganacsiyada dib-u-eegis tayo sare leh, ka warqabka wax soo saarka iyo garashada sumadda wanaagsan, adigoo la jaan qaadaya qorayaasha wax lagu qoro ee warshadahaaga ku jira. Jamballa waa boggaga cusub iyo adeeggooyinka iswaafajiya adeegga ee ku saleysan shuruudaha ay tilmaamayaan Tani waxay ka dhigan tahay in dadka wax qora ay waligood ka carqaladeynin alaabada aysan xiiseyneynin ganacsiyadana ay kaliya ku xiran yihiin baloogleyda doonaya inay la shaqeeyaan.
Jamballa sidoo kale waxay bixiyaan adeegyo war-saxaafadeed oo u baxa bloggers iyo saxaafadda gaarka ah ee warshadaha. Furaha adeegyadooda waa xisaabiyahooda gaarka ah ee hufan ee xisaabinta qaybta, shaandhaynta iyo helitaanka boggaga saxda ah - marka lagu daro bixinta kharashyada dallacaadda xagga hore.
Shaandhayntu waxay kuu oggolaaneysaa inaad sheegto qiimaha badeecadaada ama adeeggaaga (oo lagu qoro dookhyada Bloggers), goobta juqraafiyeed ee barta wax lagu qoro, tirada macaamiisha iyo booqdayaasha gaarka ah iyo haddii ay wadaagaan ama aysan wadaagin qoraalada ku saabsan warbaahinta bulshada. Xitaa waad xadidi kartaa tirada boggaga internetka ee aad jeclaan laheyd inaad la xiriirto.
Tags: gaarsiinta bloggerbloggerskasbadeen warbaahintakasbadeen wacyigelinta warbaahintaSaameeyayaashajamballa
Salsa ee aan macaash doonka ahayn: Lacag ururin, U doodaha, Wadahadal